Sii hayaha Wasiirka waxbarashada oo Degmada Balcad ka dhegax dhigay dugsi lagu baranayo cilmiga beeraha. [sawirro] | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR HIR-SHABELLE Sii hayaha Wasiirka waxbarashada oo Degmada Balcad ka dhegax dhigay dugsi lagu...
Sii hayaha Wasiirka waxbarashada oo Degmada Balcad ka dhegax dhigay dugsi lagu baranayo cilmiga beeraha. [sawirro]
Munaasabaddaan waxaa goob joog ka ahaa maamulka Gobolka, kan degmada iyo mas’uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Previous articleQaramada Midoobay oo soo dhoweysay heshiiska dhexmaray qeybaha Suudaan.
Next articleSoomaaliya oo soo dhaweysay heshiis ay gaareen dhinacyada Suudaanta Koonfureed.